Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyga Ee Maanta Oo Isniin Ah Ay Wargeysyada - Gool24.Net
Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyga Ee Maanta Oo Isniin Ah Ay Wargeysyada
Sidii aad nooga barateen, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee suuqa iibka ciyaartoyga ee ay wargeysyadu qoreen maanta oo Isniin ah:
Manchester United waxay ka bixin doontaa £80 milyan oo Gini laacibka khadka dhexe uga ciyaara Aston Villa ee Jack Grealish oo 24 jir ah, xattaa haddii kooxdiisu ku noqoto heerka labaad. (Mirror)
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Bayern Munich ee Corentin Tolisso ayaa kusoo baxay ciyaartoyda bartilmaameedka u ah Manchester United, waxaanay kooxda reer Germany doonaysaa inay ogolaato inuu baxo 25 jirkan heerka caalami ee Faransiiska ah, si lacagta ay ka hesho ay ugu adeegsato garabka Manchester City ee Leroy Sane. (Express)
Juventus ayaa kula biirtay Manchester United tartanka loogu jiro weeraryahanka Wolves ee Raul Jimenez oo 29 jir ah. (Times)
Liverpool ayaa la sheegay inay Manchester City ku garaacayso saxeexa difaaca Leicester City iyo xulka qaranka Turkey ee Caglar Soyuncu. Barcelona ayaa sidoo kale xiisaynaysa 23 jirkan. (AS)
Garabka Bournemouth iyo xulka Scotland ee Ryan Fraser oo 26 jir ah ayaa waxa la rumaysan yahay in Tottenham ay doonayso inay heshiis xor ah kula wareegto marka uu dhamaado xili ciyaareedkan, iyadoo qandaraaska uu kula jiro Cherries uu ku egyahay 30 June. (Mirror)
Real Madrid waxay doonaysaa inay lasoo saxeexato weeraryahanka Borussia Dortmund iyo xulka Norway ee Erling Haaland oo 19 jir ah iyo Kylian Mbappe oo ah 21 jir u ciyaara PSG iyo xulka Faransiiska. (AS)
Paris St-Germain ayaan la filaynin inay heshiis cusub u bandhigto weeraryahanka reer Uruguay ee Edinson Cavani. Newcastle United ayaa la sheegay inay doonayso inay la saxeexato 33 jirkan. (Express)
Khadka dhexe ee Liverpool ee Pedro Chirivella oo 22 jir ah ayey kooxdiisu usoo bandhigto heshiis shan sannadood ah, laakiin wali go’aan kama gaadhin mustaqbalkiisa, inkasta oo uu dalabyo ka helayo kooxaha Nantes iyo Rangers. (Goal)
Liverpool waxa kale oo ay danaynaysaa inay xagaaga u dhaqaaqdo weeraryahanka Roma ee Nicolo Zaniolo oo ah 20 jir ay sidoo kale raaidnayaan Manchester United iyo Tottenham. (Corriere dello Sport)
Difaaca Real Sociedad ee Diego Llorente oo 26 jir ah ayaa doonaya inuu kooxdaas ka tago xagaagan, waxaana durba xiisahooda muujiyey Monaco iyo Liverpool. (La Razon)
Crystal Palace waxay qorshaynaysaa weerar saddex geesood ah oo ay ku qaaddo Burnley oo ay ka doonayso tababare Sean Dyche, laacibka garabka ka ciyaara ee Dwight McNeil oo 20 jir ah difaaca James Tarkowski oo 27 jir ah. (Mirror)
Manchesdter Untied waxay ku qasban tahay inay Real Madrid ka hor qaaddo difaaca Inter ee Milan Skriniar oo ah 25 jir ay kooxdiisu isku diyaarinayso inay u ogolaato inuu bixi karo xagaagan. (Mirror)
Khadka dhexe ee Fiorentina, Christian Koffi oo 19 jir ah ayaa go’aansaday inuu iska diido ku biirista Liverpool sannadkii 2018, laakiin wuxuu rumaysan yahay in go’aankiisu aanu qalad ahayn. (Sofoot)
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Brescia ee Sandro Tonali oo lagu xidhiidhinayay Liverpool ayaa qarka u saaran Inter Milan, kaddib markii uu 20 jirkani iska diiday inuu ku biiro Juventus. (Le10 Sport)